Meksika: Manam-pahaizana Momba Ny Mangarahara Nisy Nikasa Hitifitra Tao Amin’ny Faritry ny Oniversite · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2014 7:47 GMT
Vakio amin'ny teny Aymara, English, English, Français, Català, বাংলা, Español
Nieren-doza tamin'ny fanafihana nitranga ny marainan'ny 29 Oktobra 2014 ilay mpahay lalàna Meksikana Ernesto Villanueva, raha iny nitondra fiara tao an-tokontanin'ny Oniversite Nasionaly Mizakatenan'i Meksika (UNAM) iny, sokajian'ny maro ho ivom-pampianarana ambony malaza sy tsara indrindra ao amin'ny firenena. Tifitra maro no nalefa tany amin'i Villanueva tao ivelan'ny tranobe misy ny Ivon-toeram-pikarohana momba ny Lalàna.
Nandany fotoana tamin'ny fandinihana momba ny zo hahazo vaovao, ny fahalalaham-pitenenana, ny mangarahara sy ny fitazonana andraikitra tamin'izay natao i Ernesto Villanueva (@evillanuevamx). Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nosokajiana tao anatin'ireo kandidà azo itokisana ho Mpitantsoroka ao amin'ny Ivon-toerana Federaly Hoan'ny Fahazoam-baovao sy ny Fiarovana Tahiry ao Meksika izy, andraikitra izay miantoka ny fahazoam-baovao.
Tamina lahatsoratra vao haingana nivoaka tao amin'ny gazetiboky Proceso, niampanga ny tsy fisian'ny mangarahara sy ireo tsy fetezana hafa voalaza fa nanaloka ny fanendrena ny talen'ny Ivon-toeram-pikarohana momba ny Lalàna ny Dr. Villanueva, ka nahatafiditra ihany koa ny talen'ny Ivon-toerana teo aloha Diego Valadés. Nitsipaka mafy ny fanambarana nataon'i Villanueva sy niampanga azy ho manao fanalam-baraka ny Ivon-toerana ireo mpampianatry ny oniversite maromaro, mampiasa ny zony hamaly ilay lahatsoratra tao amin'ny gazetiboky .
Ho fanazavana ny anton'ny fifandirana, araka ny filazan'ny Proceso, nihevitra i Dr Villanueva fa mety tafiditra tao anatin'ny fanaovana heloka bevava i Valadés:
Leo tena leo! Notafihana TAO ANATIN'NY faritry ny oniversite i Dr @evillanuevamx. Miray hina aminy isika. Hery.
Ho firaisankina miaraka amin'i Dr Ernesto Villanueva, @evillanuevamx, izay niampanga ny fikasana hanapitra ny ainy. Tokony hadihadiana lalina ity tranga ity.
Namoaka andiana lahatsoratra mikasika ny zavamisy ankehitriny ao Meksika i Dr. Villanueva, ka anisan'izany ny tantara momba ny fipoahan'ny herisetra tao amin'ny toerana nahaterahany ao Michoacán sy ny halafon'ny saram-pifindrana fitateram-bahoaka hoan'ireo mpandalo ny tanàna renivohitr'i Meksika.